အရှေ့ဘက်တွင် အင်းစိန်မြို့နယ်၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ လှိုင်မြို့နယ်၊တောင်ဘက်တွင် တွံတေးမြို့နယ်၊ ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်၊အနောက်ဘက်တွင်ထန်းတပင်မြို့နယ်၊မြောက်ဘက်တွင်ရွှေပြည်သာမြို့တို့တည်ရှိသည်။ ပန်းလှိုင်ဂေါက်ကွင်း၊ စက်မှုဇုန် ၁/၂/၃/၄/၅/၆ ၊ပန်းလှိုင်ဆေးရုံ၊ FMI CITY၊ န၀ဒေးအိမ်ရာ၊ မီးခွက်ဈေး၊ ရွှေလင်ဗန်းစက်မှုဇုန်၊ဒဂုံဧရာအဝေးပြေးဝင်း၊ တန်ဖိုးနည်းအိမ်ရာများနှင့် အလွန်လူဦးရေထူထပ်စည်ကားသောနေရာဖြစ်ပါသည်။
လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊စက်မှုဇုန်ရှိ မြေကွက်(100×100) ၊ ဂိုဒေါင်(50×60) ၊ လူနေအိမ် (22×15) ၊ ရေမီး၊ ပါဝါမီတာ၊ အမှုန့်ကြိတ် စကာချလုပ်ငန်းများအတွက် စက်များပါ ၊ အငှားခေါ်ဈေး-19 Lks Available warehouse and land to rent…
Price: 19 L Type: Hostel 149 Views June 13, 2019
Hall Type ၊ တမံတလင်းခင်းထားသည်။အကျယ်အ၀န်း (40’x60′) ၊ စားသောက်ဆိုင်ခန်းမဖွင့်ရန်အဆင်ပြေပါသည်။
Price: 5L Type: Hostel 148 Views February 19, 2019
အဆောင်ငှားမည် (အမျိုးသား / အမျိုးသမီး)
မင်္ဂလာပါရှင်…………… သမိုင်းလမ်းဆုံ/သမိုင်း City Mart အနီး ကားမှတ်တိုင် ရထားဘူတာ အနီး သမိုင်းမုဒိတာအိမ်ရာတွင် အမျိုးသား/အမျိူးသမီး အဆောင် အမြန်ငှားရန်ရှိပါတယ် လချင်းပေးတစ်လ ၄၂၀၀၀ ကျပ် အမျိူးသား အမျိူးသမီး တစ်ခန်း၂ယောက် သီးသန့်…
Type: Hostel 1010 Views July 11, 2018
ဝတီအဆင့်မြင့် အမျိုးသမီး အဆောင်
Type: Hostel 745 Views July 11, 2018
Residence For Rent (ID-8)
400 sqft residence for rent in7miles, Mayangone Township. Hall type. Asking price for one month is – 1500 USD (Nego).…
Price: 1500 USD Type: Hostel Area: 400 258 Views June 9, 2018
တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ် ၊ ပဒေသာလမ်းဆုံအနီး (အမျိုးသားသီးသန့်အဆောင်) Hall – 25000 Ks ဆက်သွယ်ရန် – 09 972419186
Type: Hostel 295 Views May 24, 2018
တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ ရသ၀တီ(၁၄)လမ်း (အမျိုးသမီး သီးသန့်အဆောင်) (၂)ယောက်ခန်း – 40000 Ks (၃)ယောက်ခန်း – 40000 Ks Hall – 30000 Ks ဆက်သွယ်ရန် – 09 250665218
Type: Hostel 258 Views May 24, 2018
အမှတ်(၆၁၉)ဘီ ၊ ဂရုဏာ-၆ လမ်း(အောက်)တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ် (အမျိုးသမီး သီးသန့်အဆောင်) (၂)ယောက်အခန်း – 40000 ks ဆက်သွယ်ရန် – 09 975726519 ၊ 09 795463454
Type: Hostel 244 Views May 24, 2018
တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ် မင်းရဲကျော်စွာ(၄)လမ်း (အမျိုးသမီးအဆောင် ) Hall – 30000 ks ဆက်သွယ်ရန်- 09 954078383
Type: Hostel 242 Views May 24, 2018